DEG-DEG: Xiddigii Lala Xiriirinayay Kooxaha Premier League Ee Pierre-Emerick Aubameyang Oo Ku Dhaw In Uu Koox 72 Milyan Ugu Biiro – Kooxda.com
Home 2018 January Jarmalka, Wararka Maanta DEG-DEG: Xiddigii Lala Xiriirinayay Kooxaha Premier League Ee Pierre-Emerick Aubameyang Oo Ku Dhaw In Uu Koox 72 Milyan Ugu Biiro
DEG-DEG: Xiddigii Lala Xiriirinayay Kooxaha Premier League Ee Pierre-Emerick Aubameyang Oo Ku Dhaw In Uu Koox 72 Milyan Ugu Biiro
Xiddiga lala xiriirinayo kooxaha chelsea,Arsenal iyo Liverpool ee u ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa lagu soo waramayaa in uu heshiis la gaaray kooxdii uu ku biiri lahaa.
Kooxda Guangzhou Evergrande ayaa heshiis hordhac ah la gaartay Borussia Dortmund si ay ula saxiixato Pierre Emerick Aubameyang iyada oo ka bixinaysa lacag dhan 72 milyan oo euro sida ay ku warameyso Sina Sports.
Aubameyang ayaa lala xiriirinayay in uu u wareegay China xagaagii lasoo dhaafay xilli ay kooxda Tianjin Quanjian doonaysay in ay hesho adeegiisa waxana ay u muuqataa in uu bisha tagi doono bariga fog.
Sida laga soo xigtay Sina Sports, Guangzhou Evergrande ayaa wadahadalo horumar leh kula jirta kooxda Dortmund iyaga oo 72 milyan oo euro ku doonaya adeega xiddigan.
Kooxda.com ayaa todobaadkan idiin soo gudbisay in ay kooxda reer china ee uu hogaamiyo tababare Fabio Cannavaro ay doonayso in ay xiddigan ku xoojiso kooxdiisa.
Warkan ayaa u xun kooxaha premier league kuwaas oo ku rajo weynaa in ay saxiixa xiddigan u dhaqaaqaanaa xagaaga dambe marka uu suuqu furmo.